यी महिला रोबोटको प्रेममा, चाँडै नै विवाह गर्ने
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका विज्ञ डेभिड लेभीले सन् २०५० सम्म मानव र रोबोटबिच विवाह निकै साधारण हुने बताइरहेका बेला एक फ्रान्सेली महिला र उनले बनाएको ‘थ्रीडी प्रिन्टेड’ रोबोटका बिच रोमान्टिक सम्बन्धले उनको भविष्यवाणीको थालनी गरेको भन्दा फरक नपर्ला । सुरुमा यो कुरा सुन्दा तपाईंमध्ये धेरैले यो कुरालाई नपत्याउनुहोला तर लिली नामकी यी ..
गोहीसँग सेल्फी लिन खोज्दा…
फ्रान्सकी एक महिलालाई गोहीले टोकेपछि अस्पतालको शैयामा पुगेकी छिन् । उनलाई गोहीले..
मृत्युका यी १२ रोचक तथ्य जसले अचम्मित बनाइदिन्छ
जीवन अनिश्चित छ अनि मृत्य अवश्यम्भावी । मृत्युसँग जोडिएका केही रोचक तथ्य यहाँ पस..
एउटै घरमा बस्छन् तर २० वर्षदेखि श्रीमतीसँग रिसाएर बोलेका छैनन्, अचम्म छ कारण
हुन त झगडा नहुने श्रीमान् श्रीमती कसको होला र ? तर यहाँ जुन जोडीको कुरा गर्दै छौ..
तीन मिनटेको भिडियो हेर्नुहोस् र जान्नुहोस कम्मरमा गाँठो बनाउने कला
तपाईं यी महिलाको कला देख्नुहुन्छ भने यो तीन मिनेटको भिडियो हेर्नुहास् । उनले कम्..
यी दिलदार व्यापारी जो बाबु नभएका दुलहीको धुमधाम विवाह गराउँछन् (फोटो/भिडियो)
गुजरात – भारत विकासको गतिमा अघि बढेपनि समाज भने अझै रुढीवादी नै रहेको छ । त्यही भएर विवाहमा दुलहा पक्षलाई खुसी बनाउन दुलही पक्षले विवाहमा ठूलो भोज र समारोहको आयोजना गर्नुपर्छ । तर, यदी घरको मुख्य व्यक्ति (दुलहीको पिता) को निधन भएको खण्डमा, विशेष गरेर गरिब परिवारका लागि, विवाह कल्पनाभन्दा बाहिर हुने गर्छ । यहाँ […]
गर्भवती महिलाले यस्तो रमाइलो गरेपछि… हेर्नुहोस् १६ तस्वीरमा
गर्भवती महिला कति संवेदनशिल तरिकाले आफ्नो शरीरको ख्याल गर्छन, तपाईं–हामी सवैले देखेका छौँ । तर, कतिपय गर्भवती महिला चाहिँ यो समयमा पनि रमाइलो गर्न मन पराउँछन् । सोसल मिडियामा त्यस्ता गर्भवती महिलाका तस्वीर भाईरल भएका छन् । तपाईं पनि हेर्नुहोस्, यी गर्भवती महिलाका फोटो
१८ तस्वीर हेर्नुहोस्, अनि हास्नुहोस् !
भारतीय नागरिक व्यवस्थापनमा अलि अगाडि छन् । व्यवस्थापन यति धेरै गर्छन कि, फोटा हेर्दा नै हाँसो लाग्छ । केही तस्वीर सोसल मिडियामा भाइरल भए । केही सम्पादन गरेका पनि हुन सक्छन् । जे होस्, तपाईं हेर्नुहोस् केही तस्वीर । यस्ता तस्वीर भारतमा बाहेक अनेत्र देख्न पाइदैन । भारतीय मिडियाले चासोसाथ जीवनशैलीका यी तस्वीर छापेका छन् । [&helli..
सावधान ! धोकादिएपछि ब्वाइफ्रेन्डले गरे गर्लफ्रेन्डको यो हालत (भिडियो)
नयाँ बर्षमा मस्ती गरिरहेका ब्वाइफ्रेन्ड–गर्लफ्रेन्डका लागि चिन्ताको विषय छ । तपाईं एकले अर्कालाई धोका त दिनुभएको छैन ? सावधान हुनुहोला, ब्राजीलमा यस्तो भएको छ, जसलाई पढेपछि कुनै पनि ब्वाइफ्रेन्ड–गर्लफ्रेन्डका एक पटक सोच्न बाध्य हुनेछन् । एक ड्रग माफियाले आफ्नी गर्लफ्रेन्डलाई यस्ता सजाय दिएका छन्, तीय यूवती यो घटना कहिल्यै भुल्ने..
यी हुन् छुटाउनै नहुने वर्षका उत्कृष्ट वन्यजन्तुका तस्बिरहरु
सन् २०१६ हामीबाट बिदा हुँदैछ । यस मौकामा हामी तपाईंलाई केही यस्ता तस्बिर सेयर गरेका छौं जुन यो वर्षको उत्कृष्ट तस्बिर मानिएका छन् । यहाँ दिइएका यी तस्बिरहरु सन् २०१६ का उत्कृष्ट तस्बिर मध्येका एक हुन् । यी तस्बिर युक्रेनका चर्चित फोटोग्राफर, सर्गे पोलिउस्कोले आफ्नो क्यामरामा कैद गरेका हुन् । हेरौं यी तस्बिरहरुः
एकैपटक पाँच बच्चा जन्माएर यिनले दोहोराइन् १२१ वर्ष पुरानो इतिहास
अमेरिकाको एरिजोनाको फिनिक्स शहरमा मारग्रेट बाउडिनेट र उनका श्रीमान माइकलले गत डिसेम्बर ४ तारिखमा डिग्निटी हेल्थ सेन्ट जोसेफ अस्पताल र मेडिकल सेन्टरमा एकैसाथ चार छोरी र एक छोरालाई जन्म दिएका छन् । भर्जिनियाको यो जोडी डा. जोन इलोइट (मल्टिपल–बर्थ प्रेगनेन्सीका विशेषज्ञ) सँग उपचार गराउनका लागि अस्थायी रुपमा एरिजोना बसाईं सरेका थिए ।..
एक मानिस र माछाबिचको २५ वर्षे पुरानो प्रेम कहानी (भिडियो)
जपानाको चिबा प्रान्तमा अवस्थित ततेयामा बे, दुई अचम्मका साथीहरुको भेट्ने स्थल बनेको छ । स्थानीय गोताखोर हिरोयुकी अराकावा र योरिको नामको एसियाली सिपसेड र्यासबिच निकै बलियो सम्बन्ध स्थापित भएको छ । यी दुई विगत २५ वर्ष पहिले भेटेका थिए । त्यतिबेला देखि नै उनीहरु एकअर्कालाई बारम्बार भेटिरहन्छन् । आराकावाले विगत २५ वर्षदेखि तातेयामा ..
क्यामरामा कैद भएका यी फोटो जुन छन् निकै ‘लज्जास्पद’
सोसल साइटमा यस्तो फोटो भाइरल हुने गरेका छन् जसलाई देखेर अचम्म लाग्छ । यस्तोमा कुनै फोटो निकै हाँस्यास्पद हुन्छन् त कुनै ठिक समयमा कैद गरिएका र कसैले भने समाजमा प्रेरणा दिइरहेका हुन्छन् । यस्तैमा कुनै फोटो भने निकै लज्जास्पद हुन्छन् । आज हामी तपाईंलाई यस्तै फोटो देखाउँदैछौं ।
गज्जबको बाइक जसलाई उठाउन सकिन्छ, ब्यागमा राख्न सकिन्छ र सिढिंमा चढाउन पनि (भिडियो)
तपाईंले अहिलेसम्म यस्तो बाइक देख्नुभएको छैन होला जुन हिलोमा दौडन्छ । सिढींमा चढ्न सक्छ । सायद देख्नुभएको छ भने पनि फिल्ममा मात्र होला । आज हामी तपाईंलाई यस्तो एउटा बाइकबारे जानकारी दिँदै छौं जतिबेला तपाईंलाई मन लागे चलाउन सक्नुहुन्छ र मन नलाग्दा ब्यागमा प्याक गरेर राख्न सक्नुहुन्छ । यो बाइकका विशेषताले मानिसहरुको होस उडाइदिएको छ..
उफ् ! यो कस्तो फोटोग्राफी
यी सबै तस्बिरका मालिक इन्डोनेसियाका मोहम्मद रोयम हुन् जो क्लोज–अप तस्बिर खिच्न पोख्त छन् । २८ वर्षीया रोयम फोटोग्राफीका शौखिन हुन् । फोटो हेर्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्ला कि उनको यो शौख मात्र तीन वर्ष पुरानो हो । रोयमका धेरैजसो तस्बिर भ्यागुताका हुन्छन् । उनलाई सायद भ्यागुता मनपर्लान् । रोयमले बीबीसीलाई भने, ‘म किरा फट्याङ्ग्रालाई प..
जब वासिङ मेसिनमा भेटियो १२ फिट लामो अजिंगर (भिडियोसहित)
थाइल्याण्डमा सबैलाई चकित पारिदिने एउटा घटना सार्वजनिक भएको छ । ४८ वर्षीया कोर्नचारुन रोइक्चाईको घरको वासिङ मेसिनमा १२ फिट लामो अजिंगर भेटिएको छ । उक्त भयानक दृश्यपछि निकै आत्तिएका उनले वन्यजन्तु बचाउने टोलीलाई खबर गरे । उक्त टोलीले अजिंगरलाई वासिङ मेसिनबाट सफलतापूर्वक निकाल्नका लागि ३० मिनेटको समय लगाए । क्रोन्चारुनले आफ्नो लागि..
वास्तविक देखिने यस्ता डरलाग्दा केक, के खान सक्नुहुन्छ तपाईं ?
नाताली साइडरसर्फ अमेरिकाकी चर्चित केक आर्टिस्ट हुन् जसको विशेषता निकै वास्तविक देखिने केक बनाउनु हो । उनले डिजानइ गरेका केक यस्ता हुन्छन् जुन खान त परै जाओस् हेर्दा मात्रै पनि डरलाग्दा हुन्छन् । हेरौं उनले डिजाइन गरेका अचम्मका केक ।
छेपारोले मात्र रङ परिवर्तन गर्छ भन्ने लाग्छ ? भ्रममा नपर्नुहोस्, हेरौं २० अन्य जीव
जङ्गलमा बाँच्नु एक चुनौती हो – विशेषगरी जब तपाईं आफ्ना सम्भावित शिकारीभन्दा सानो र ढिलो हुँदा । त्यसकारण विकासको क्रममा विभिन्न जीवजन्तुले आफूले आफैंलाई लुकाउने एउटा गुणको विकास गरे जसलाई अंग्रेजीमा ‘क्यामोफ्लेज’ भनिन्छ । आफूलाई वातावरण अनुरुप परिवर्तन गरेर वा आफू जुन स्थानमा बसेको ठ्याक्कै त्यस्तै भएर अथवा रङ परिवर्तन गरेर त्यस..
संसारभरका निकै अचम्मका ‘सेक्स ट्रेडिसन’
सेक्स शब्द सुन्नेबित्तिकै धेरैजसो मानिस लजाउने गर्दछ, यस्तो किन हुन्छ ? किनभने हाम्रो समाजमा हामीलाई यस्तै सिकाइएको हुन्छ । तर संसारभरी यस्ता थुप्रै मानिस र समूदाय छन् जो सेक्सका बारे निकै खुल्ला बिचारका हुन्छन् । आज हामी तपाईंलाई यस्तै सेक्स परम्परको बारेमा जानकारी दिँदै छौं जो निकै अचम्मका छन् । बीर्य पिउनुः न्यू गुइएनाको समबि..
पोर्न उद्योगसँग जोडिएका १० रोचक तथ्य
जबदेखि इन्टरनेट सबैको पहुँचमा पुगेको छ त्यतिबेलादेखि पोर्नबारे लगभग धेरैजसोलाई थाहा छ । तपाईंलाई थाहा नै छ होला, यसको पूरा उद्योग नै हुन्छ । तपाईं यसलाई फिल्म इन्डष्ट्रि जस्तै बुझ्न सक्नुहुन्छ । र यसमा धेरै मात्रामा एक्टिङ नै हुने गर्दछ । पोर्न उद्योगका रोचक तथ्यबारे हामी तपाईंलाई जानकारी दिँदै छौं । पारिश्रमिकः एक पुरुष स्टारका..
गिनिज बुकमा सुचिकृत संसारको सबैभन्दा पिरो खुर्सानी खाएपछि… (भिडियोसहित)
१८ वर्षीया लिजि र सब्रिनाले संसारको सबैभन्दा पिरो खुर्सानी खाएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनीहरु एकाएक चर्चामा आएका थिए । चार महिनाअघि पोष्ट गरिएको उक्त भिडियो संसारको सबैभन्दा पिरो खुर्सानी खाने प्रतिस्पर्धाको शीर्षकमा पोष्ट गरिएको छ । क्यरोलिना रिपर पिपर नाम दिइएको उक्त खुर्सानी खाएपछि उनीहरुको प्रतिक्रिया निकै भयानक देखिएको छ ।..
रोचक : एलियन होइनन् यिनीहरु… (फोटोफिचर)
मस्को – पृथ्वीभन्दा बाहिर पनि जीवहरुको अस्तित्व छ भनेर वैज्ञानिकहरुले धेरै पहिलेदेखि अध्ययन गर्दै आएका हुन् । त्यही अवधारणामा ‘एलियन’ बारे कयौँ काल्पनिक चलचित्रहरु पनि निर्माण भएका छन् । एलियनहरु कस्तो हुन्छन् भनेर मानिसले कल्पना गरेजस्तै जीव पृथ्वीभन्दा बाहिर नभएर यहीँ नै पाइन सकिन्छ । वास्तवमा विश्वको ठूलो हिस्सा ओगटेको समुद्र..
कमैले विश्वास गर्ने संसारका यी अपत्यारिला तस्बिर
भनिन्छ, हरेक तस्बिरले केही न केही वर्णन गरेको हुन्छ, हरेक तस्बिर हज्जारौं शब्द बराबर हुन्छ तर यस्ता थुप्रै तस्बिर छन् जसमा विश्वास गर्न निकै मुश्किल हुन्छ । किनभने ती तस्बिरहरु कल्पनाभन्दा बाहिर हुन्छन् । आज हामी तपाईंलाई यस्ता तस्बिरहरु देखाउँदैछौं जुन हेर्दा फोटोसप लाग्छन् तर यी वास्तविक हुन् ।
यहाँ आफै सर्छन् ढुङ्गा, नासाले सुल्झाउन नसकेको रहस्य
डेथ भ्याली पूर्वी क्यालिफोर्नियामा रहेको एक मरुभुमी हो । यो उत्तरी अमेरिकाको सबैभन्दा गर्मी, सुख्खा र विचित्र स्थान हो । क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्यालीको संरचना र तापक्रमले भू–वैज्ञानिकलाई सधैं अचम्मित पारिरहेको छ । अझै योभन्दा बढि अचम्मको कुरा के छ भने यहाँका ढुङ्गा आफ्सेआफ सर्छन् ।यी ढुङ्गालाई ‘सेलिंग स्टोन्स’ को नामले पनि परिचित..
रमाइलोका लागि खिचिएका यी तस्बिर अपलोड भएपछि बने भाइरल
सबैको जीवनमा यस्ता पल हुन्छन् जसलाई उनीहरु कसैसँग पनि सेयर गर्न चाहँदैनन् । तर आज हामी तपाईंका लागि मानिसको दैनिकीका केही तस्बिरहरु सार्वजनिक गर्दै छौं जुन हेर्दा तपाईंको हाँसो छुट्छ ।